जतिबेला चीन संकटमा थियो, युरोप र अमेरिका ठट्टा गर्दैथिए, बल्ल उनीहरुको आँखा खुलेको छ – Karnalikhabar
हामी सबैले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी एउटा रास्ट्र हौं। तेसैले हामीले एउटा रास्ट्रको जस्तो व्यवहार गर्न पनि जान्नु पर्छ। हामी अहिले संसारनै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको समयमा छौँ। धेरै कुराहरु बाहिर प्रकट भएका छन र देख्न सकिन्छ। मन्थन गरौँ, चिन्तन गरौं, फेरि मन्थन गरौँ। १. जब चीन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडार्इं लडिरहेको थियो, वुहान बन्द गरिएको थियो, चिनियाँ जनता आतंकित थिए, चीन बिश्वलाई सहयोग र सद्भावका लागि आह्वान गरिरेहेको थियो तर त्यसबेला युरोप र अमेरिका ठट्टा गर्दैथिए। ट्र्म्पले पटक पटक चिनियाँ भाइरस भनी व्याङ्ग्य गरे। युरोपका शहरमा चिनियाँ मानिसहरु कुटिए। नेपालमा एउटा पत्रिकाले मजाक गर्दै माओको मुखमा मास्कलगाएको तस्वीर छाप्यो। नेपाल सरकारले मानवताका आधारमा सीमाना जोडिएको छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखें। स्वयमसेवक, आफ्नो इच्छाले जान चाहाने एउटा चिकित्सकको समूह चीन पठाउनु पर्थ्यो। नेपालले चीन सँगको कुटनीतिमा ठूलो त्रुटी देखायो, त्यसबेला ।
चीन गएका नेपाली बिद्यार्थीलाई घर आउने अधिकार थियो। तर सरकारले रेस्कु, इभ्याक्युयसन वा उद्धार जस्ता गलत शब्द प्रयोग गर्यो। चिनियाँ जनताप्रति त्यसबेला जुन संवेदना हामीले देखाउनु पर्थ्यो, हामीले देखाएनौं। हामीलाई त्यसले कतै छोएन। तर जब महामारी पश्चिम पुग्यो, हाम्रा आँखा अचानक खुले। २. यो भाइरस रोग थियो। यस्को रास्ट्रीयता थिएन। यो मानिसको विरुद्ध थियो रास्ट्रीयताको बिरुद्ध थिएन। तर युरो–अमेरिकन संचारमाध्यमले यसलार्इ राजनीतिक ठट्टामा बदले। साप र चमेरो खाएर भएको भनेर लेखे। पस्चिमी संस्थाले जनाबार मारेको पाप कराएको भनेर लेखे। केही नेपाली संचार माध्यमले पनि यही कुरा दोहोर्याए। अब चीन सकियो भनेर पस्चिमले खुसी देखायो, जब रोगका विरुद्ध लडार्इं शुरु गर्यो चीनले, अधिनायकवादको कुरा उठाए। कुटिकुटी मानिस थुनेको आरोप लगाए। अर्थात रोगलाई राजनीतिकरण गरे। त्यसको नक्क्ल गर्ने नेपालमा पनि थिए। पश्चिमी मुलुकले त्यसबेला चीनलाई यस महामारीका विरुद्ध सहयोग गर्नुपर्ने थियो। रोगमा राजनीति गर्नु हुने थिएन।
५. यो समस्यालाई सरकारले हेलचेक्राइँ नगरोस। तत्काल निम्न कुरा गर्नु गर्नुपर्ने देखिन्छ। क. चीनसँग सहयोग मागोस। चिकित्सक, औषधि र प्रबिधि तत्काल ल्याओस। आइसोलेसन गृह निर्माणमा सेनाको प्रयोग गरोस। बाँचे मात्र पछि प्रगति गरिने हो। ख. कालाबजारी रोक्न र महामारीका नाममा देखिएको कालाबजारी र स्थानीय तहमा देख्न थालिएको अपब्यय रोक्न आपतकाल घोषणा गरियोस् । ग. सीमाना बन्द गरियोस र तराइका सबै शहरमा उच्चस्तरीय स्वास्थ समूहहरु पठाइयोस। तरार्इका जनतालाई आतंकबाट जोगाइयोस।
६. हरेक समस्याले पाठ सिकाउँछ्। हाम्रो संघीयता कति सफल छ ? भन्ने यसले नै देखाउने छ । सरकारले राम्रोसँग डेलिभरी गरेन भने र दलहरुले आफ्नो औचित्यता प्रमाणित गरेनन भने बिद्युतको तालिम केन्द्रमा नेताहरुले पुग्नुपर्ने हुनसक्छ। भित्र र बाहिर दुबैतिर घेराबन्दी भएको देख्नु भएकै होला। निरो रोम जल्दा बांसुरीमा आफ्नो गीतको लय बनाउदै थिए। अहिले पो थाह भयो उनी रोम जलोस भन्ने चाहँदारहेछ्न। उनी त्यहाँ ठूलो महल बनाउन चाहँदा रहेछ्न। जतिबेला रोम जल्दै थियो, उनले बार्द्लिमा उभिएर हेरेछ्न, रातमा उज्यालो । उनलाई खुब मन परेछ । त्यसपछि जुन अराजकता रोममा जन्मियो, त्यसले रोम नै मासियो। हामीले आँखा खोल्नु आवश्यक छ । भूकम्पपछि मानिसमा अराजकता झन मौलायो। यो महामारीले अराजक पराबलियनहरुको ताँती झन झन बढ्ने छ। अहिलेको मोजमस्ती महङो हुनेछ। प्राडा युवराज सँग्रौलाको फेसबुकबाट ।
अघिल्लो - माग घटेपछि भारतबाट आउने बिजुली रोक्ने तयारी, विद्युतीय उपकरण चलाउन कुलमानको आग्रह
लकडाउनको अवज्ञा गर्ने २५ वटा माेटरसाईकल रंगेली प्रहरीकाे नियन्त्रणमा - पछिल्लो